Hay'adda UNHCR oo gurmad gaarsiisay dadkii ka barakacay Beledweyne | Dusta News
Home > General > Hay’adda UNHCR oo gurmad gaarsiisay dadkii ka barakacay Beledweyne
Hay’adda UNHCR oo gurmad gaarsiisay dadkii ka barakacay Beledweyne
May 25, 2020 May 25, 2020 Dusta News149Leave a Comment on Hay’adda UNHCR oo gurmad gaarsiisay dadkii ka barakacay Beledweyne
Hay’ada qaxootiga aduunka ee UNHCR ayaa deeq gaarsiisay dadka ka barakacay fatahaada Beledweyne, deeqda ayaa isugu jirtay baco, bustayaal iyo maacuun muhiim u ah shacabka aay saameeysay fatahaada.
Kaalmadan ayaa lagaarsiiyay dad gaaraya 2000 oo qof oo ku barakacay daafaha magaalada Beledweyne. Dadka ka faa’ideeystay deeqda ayaa markii hore ku noolaa kaamamka barakacayaasha, waxaana saameeyn xoogan ku yeeshay fatahaada wabiga.
Xaawo Axmed Maxamed oo ah isku duwaha gargaarka iyo maareeynta masiibooyinka gobolka Hiiraan ayaa sheegtay in deeqdan aay muhiim u tahay shacabka barakacay, waxaana aay hay’addaha ugu baaqday in la caawiyo dadka barakacay.
Waa markii ugu horeeysay ee gargaar lagaarsiiyo dadka ka barakacay fatahaada Beledweyne tan iyo markii todobaadyo kahor wabiga shabeelle uu fatahaad ka geeystay magaalada Beledweyne.
Duqeymo ka dhacday gobolada Jubbada hoose, shabeellada Hoose iyo Baay
Waqtiga uu furmayo kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya oo la shaaciyay
Xoghayaha Gobolka Shabeellaha Hoose oo shaqo joojin lagu sameeyay
Muslimiinta Shiinaha ee Uighur oo lagu qasbayo in aysan carruur badan dhalin